Kudzivirirwa kubva pakupisa kwezuva nemigumisiro yaro - nzira yekuzvidzivirira nayo
Kana uchinge wava mukoko
Nguva yezhizha nguva yezororo uye mukana mukuru wekuita mabasa ose ekunze. Vaduku nevakuru havafanire kukanganwa kuvhara mukati mazvo. Asi sei kudzivirirwa kubva pakupisa kwezuva kwakakosha, nei iwe uchifanira kuchengetedza ganda rako kubva pakuwandisa kwezuva uye ndeipi nzira yakanakisisa yekuita nayo?
Kusina kudzivirirwa pakusana kwezuva nemigumisiro yaro
Mazai eVV ane chiedza chezuva rinovhiringidza ganda pose paanoratidzwa kwenguva refu. Pakati pezvimwe zvinhu, izvi zvinogona kukonzera kupisa kwezuva kunorwadza, umo ganda rinova rakaoma zvikuru kumanikidziro.
Uyewo kugadzirisa zvinokonzera zvirwere zvinogona kuitika.
Kupisa kwezuva kunonyanya kuipa, asi zvikurukuru nokuti vanogona kukonzera kukanganisa kwehutano kwenguva refu, yakadai sekenza yenguruve.
Pazororo, ndeyechokwadi kunyanya nyore nyore kuwana kupisa kwezuva, nokuti inowanzowanzopfekedzwa chete munzira.
Mukuwedzera, mumwe anowanzokanganwa kuti zvinokwanisika kuwana kupisa kwezuva kunyange mumakore ane makore kana mumumvuri usina kukodzera. Saka zvigaro zvekuchengetedza zvigaro zvinonyanya kukosha kana uchienda kunyika dzinodziya. Nzira iri nyore yekuzvidzivirira kubva kunezuva ndeyokupfekedza zvipfeko zvakazara.
Kudzivirirwa kubva zuva kunokosha
Nokuti izvi hazvisi nguva dzose zvinonakidza mumatambo anotonhora, zvinofanira kuva sechiedza uye mhepo inogadziriswa sezvinobvira. Izvi hazviiti kuti iwe upike kana uchifamba zvishoma. Hati zvipfeko zvikavewo chikamu chewadhirobe kana seimwe sarasi.
Kupfeka chikwata chekushambadzira, shanje kana bhisiini, unofanirwa kushanda kune chisiki chezuva, chine SPF yakakwirira. Zvingave zvakakwana kana zvisingasviki zvakapfekedzwa, haufaniri kukanganwa magirazi emasikati, kuitira kuti maziso azvidzivirire kubva pamagetsi akawanda. Kana iwe ukatevedzera mitemo iyi iri nyore, iwe zvino unogona kuenda iko kwezororo!
Kana ganda rakatsvuka sehomeri yakabikwa, unoziva kuti iwe uri muzuva kwenguva refu. Saka chii chaunofanira kuita kana chakakurova iwe kamwechete uye ganda riri kupisa uye rinopisa? Kupisa kunokonzera uye kumira kunonwisa uye kunobatsira ganda kuti riwane.
Kupisa kwezuva kunogadzirisa mufaro wezororo
Kazhinji, zvigadzirwa zvine aloe vera kana chamomile zvinokurudzirwa. Iro rubatsiro rwakanakisisa, runotarisirwawo nerudzi rweganda, ndicho chikonzero nei zvingave zvakakosha kuva nezvimwe zvitema mukati. Izvo zvakakodzerwa zvakakwana nokuda kwekununurwa kunorwadza, maapuriki mafiropu kana kuti mvura inonaya. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kunwa zvakanyanya kuti usununguke ganda rakamanikidzwa.
Nokuda kwekudzivirira uye kuoma kwezuva, zvinokurudzirwa kuwana anti-inflammatory drugs kubva kunechiremba. Mishonga yemusha inowanzotaurwa yakarongeka chete. Inowanzokurudzirwa kubvisa Quark pane nzvimbo dzakakanganiswa panguva yekupisa kwezuva.
Kunyangwe ichi chinopisa zvakanyanya kufadza, asi chinogonawo kutungamirira kuhutachiona kana kukanganiswa kwezvirwere nekuda kwemabhakitiriya aripo, izvo zvinongowedzera mamiriro ezvinhu.
Sei tine ruzha nemubvunzo - godo remwana